မူခင်းသတင်း – Shwemyanmar
တူမက ဦးလေးကို ဓားဖြင့်ထိုးရာမှ လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
တူမက ဦးလေးကို ဓားဖြင့်ထိုးရာမှ လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား ====================== နေပြည်တော် ဒီဇင်ဘာ ပျဉ်းမနားမြို့ ပေါင်းလောင် (၁)ရပ် ရွာကောက်ရပ်ကွက်တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၁ ရက် ည ၁ဝ နာရီ ကျော်ခန့်က တူမဖြစ်သူကဦးလေး တော်သူကို ဓားဖြင့်ထိုးသတ်သော လူသတ်ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ ကြောင်း ပျဉ်းမနားမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ စခန်းမှ သိရသည်။ အဆိုပါ ဖြစ်စဉ်တွင် ဦးလေး တော်သူကို သတ်ခဲ့သူ မဝသုန် (၁၈ နှစ်)သည် ဖခင်ဖြစ်သူ ဦးဆန်းဦး နှင့် ၄င်းတို့နေအိမ်အတွင်း ခိုက်ရန် ဖြစ်ပွားနေစဉ် ဦးလေးတော်စပ်သူ ဦးမြင့်အေးက ဝင်ရောက်ဖျန်ဖြေ ခဲ့ရာ မဝသုန်က ဓားဖြင့်ထိုးလိုက် ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ သေဆုံးသူ၏ဇနီး ဒေါ်အေး အေးမွန်နှင့် လူသတ်မှုကျူးလွန်သူ မဝသုန်၏မိခင် ဒေါ်ယဉ်ယဉ် […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on တူမက ဦးလေးကို ဓားဖြင့်ထိုးရာမှ လူသေဆုံးမှုဖြစ်ပွား
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်း စကားများကြရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား ဒီဇင်ဘာ ၁၅ မုံရွာ မောင်လေး ငယ်ငယ် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့တွင် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက် ညပိုင်း၌ အဆောင်နေ တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်း စကားများ၍ ခိုက်ရန်ဖြစ်ရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မုံရွာနယ်မြေရဲစခန်းမှ သိရသည်။ မုံရွာမြို့ မြဝတီရပ်ကွက် နယ်မြေ ၁၆ မေတ္တာလမ်း”မိဘမေတ္တာ”ဘော်ဒါဆောင်တွင် ငှားရမ်းနေထိုင်ကြသည့် အဆောင်နေ တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားများသည် ဒီဇင်ဘာလ ၁၅ ရက်ည ၈ နာရီကျော်က အပြင်၌ အရက်တူသောက်၍ ပြန်လာကြရာ အဆိုပါ အဆောင်သို့ ရောက်ရှိချိန်တွင် အချင်းများ၍ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါ အခင်းဖြစ်ရပ်သို့ မုံရွာခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး အနီးကြီးကြပ်၍ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးနှင့် နယ်မြေရဲစခန်းမှူးတို့ သွားရောက်စစ်ဆေးကြရာ မင်းကင်းမြို့နယ် ကျွန်းတော်ရွာနေထိုင်သူ ကျော်ဖြိုးလှိုင်ဒုတိယနှစ် သမိုင်းနှင့် […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအချင်းချင်း စကားများကြရာမှ လူသတ်မှုဖြစ်ပွား
လားရှိုးမြို့နယ်၌ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
လားရှိုးမြို့နယ်၌ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ လားရှိုး ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ရှမ်းပြည်နယ်(မြောက်ပိုင်း)လားရှိုးမြို့နယ် ခါးသျှီကျေးရွာအဝင် မောင်းတံဂိတ်အနီး၌ ယမန်နေ့ နံနက် ၁၁ နာရီက ဆိုင်ကယ်စီးလာသူထံမှ ဖောက်ခွဲရေးပစ္စည်း ခဲယမ်းမီးကျောက်များ သိမ်းဆည်း ရမိကြောင်း သိရသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ အမှတ်(၂၄) မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု လားရှိုးမှ ရဲအုပ်စောထင်လင်း ဦးစီးအဖွဲ့နှင့် ရဲအုပ်ထွန်းထွန်း ဦးစီးအဖွဲ့တို့သည် သက်သေများနှင့်အတူ လားရှိုးမြို့နယ် ခါးသျှီကျေးရွာ အဝင် မောင်းတံဂိတ်အနီး၌ တန့်ယန်းဘက်မှ လားရှိုးဘက်သို့ လားရှိုးမြို့နယ် အီနိုင်းအုပ်စု ကျောက်ကျဲကျေးရွာနေ စိုင်းစံအေး ၂၅ နှစ် မောင်းနှင်လာသော SHAYAN-125 CZI ဆိုင်ကယ်အား ရပ်တန့်ရှာဖွေစစ်ဆေးသည်။ ထိုသို့ရှာဖွေရာတွင် ဆိုင်ကယ်ခွကြား၌ တင်ဆောင်လာသည့် နက်ပြာရောင် ကျောပိုးအိတ် အတွင်းမှ တရုတ်စာတန်းပါ စက္ကူဘူးခွံ အတွင်း […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on လားရှိုးမြို့နယ်၌ ဖောက်ခွဲရေး ပစ္စည်းများ သိမ်းဆည်းရမိ
“၄ နှစ်အရွယ်မြေးဖြစ်သူ အားအဖွါးဖြစ်သူ မှရိုက်နှက်ဆုံးမ လက်လွန်သေဆုံး” ၁၂.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၀၉၀၀ အချိန်ခန့် တွင် ကော့သောင်းမြို့ ပုလုံးတုံတုံးကျေးရွာ အောင်မေတ္တာ (၂)လမ်းနေ မသန်းသန်းနွယ်(ခ) မိကမ်း (၃၇) နှစ် (ဘ)ဦးသာဂန်း ကျဘမ်းလုပ် ကိုင်သူသည် ၎င်း၏မြေးဖြစ်သူ မဆောင်းဇာဝင်း (၄)နှစ်(လင်ပါမြေး)အားနေအိမ်တွင်လက်ဖြင့်ရိုက်ခြင်း၊ခြေထောက်ဖြင့်ကန်ခြင်း၊တံမြက်စည်းရိုးဖြင့်ရိုက်နက်ခြင်း၊နေအိမ်ပေါ်မှပြစ်ချခြင်းများဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ၁၄. ၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့တွင် ကလေး၏အခြေအနေမှာ စိုးရိမ်ရဖွယ်ရှိကြောင်း သတင်းများကြားသိရသဖြင့်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေး မှူးမှကော့သောင်းဆေးရုံသို့တင်ပို့ကုသနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးထားရှိခဲ့ပြီးကလေးငယ်အားဒဏ် ရာများရရှိ အောင်ရိုက်နှက်ခဲ့သူ မသန်းသန်းနွယ် အားဥပဒေအရအရေးယူပေနိုင်ပါရန် ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးဇင်ကိုဦး မှတရားလိုပြု လုပ်တိုင်တန်းခဲ့သဖြင့် ကော့သောင်းရဲစခန်း (ပ)၂၁၆၇/၂၀၁၇ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၂၅ အရအမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထားရှိခဲ့ပြီးအမှုအားစစ်ဆေးဆောင်ရွက်နေစဉ်အတွင်း ဆေးဝါးကုသမှုခံယူနေသူ မဆောင်ဇာဝင်း မှာ ဦးခေါင်းနဖူး၊ယာဘက်မျက်ကွင်းနှင့်ပါး၊ ဝဲပါး၊ရင်ဘတ်၊ကျော၊ဝဲ/ယာခြေထောက်တို့တွင် ဖူးရောင်ညိုမဲဒဏ်ရာတို့ဖြင့် ၁၄.၁၂.၂၀၁၇ ရက်နေ့ ၂၁၁၅ အချိန်သေဆုံးသွားသဖြင့် အမှုအားပုဒ်မ […]
ATM စက်​မှ သိန်း ၅၇၀ ​ကျော်​​ပျောက်​ဆုံးမှု ရှမ်းပြည်​နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့ မှ ​ဖော်​ထုတ်​နိုင်​ ​တောင်​ကြီးမြို့ဧရာဝတီဘဏ်​ခွဲ၁. မန်​​နေဂျာထံ ရန်​ကုန်​ရုံးချုပ်​မှ Royal Taunggyi. Hotel တွင်​ထားရှိ​သော ATM Terminal 5စက်​ Eroor. စက်​ချို့ယွင်း​နေသည်​ကို ရုံးချုပ်​တွင်​ထားရှိ​သော ATM. Sever. စက်​တွင်​​တွေ့ရှိ​ကြောင်း အ​ကြောင်းကြားသဖြင့်​ ဒီဇင်ဘာလ၁၂ရက်နေ့ည​နေ၅နာရီခွဲတွင်​ATMစက်​​သေတ္တာများအားဘဏ်​ခွဲ၁သို့ယူ​ဆောင်​စစ်​​ဆေးရာ ၂၂၃သိန်း၈​သောင်း၁​ထောင်​​ပျောက်​ဆုံး​နေကြောင်းသိရှိရသည်။ ဆက်​လက်​၍စူဌာမုနိဘုရား​ပေါ်ရှိ ATM Terminal3စက်​အားစစ်​​ဆေးရာ ၁၁၇ သိန်း ၅​သောင်း ၃​ထောင်​ ​ပျောက်​ဆုံး​နေသည်​ကိုထပ်​မံစစ်​​ဆေး​တွေရှိရပြီး လျို့ဝှက်​နံပါတ်​ဖြင့်​ဖွင့်​ရ​သောတံခါးမပျက်​စီးဘဲ​ပျောက်​ဆုံး​နေသဖြင့်​ Royal Taunggyi Hotal ရှိcctvစစ်​​ဆေးရာ​တောင်​ကြီးဘဏ်​ခွဲ၁ ဝန်​ထမ်း​ဟောင်း သီဟနိုင်​ဖြစ်​​ကြောင်းစစ်ဆေး​တွေ့ရှိရသည်။ သို့ဖြစ်၍ ဒီဇင်ဘာလ၁၄ရက်နေ့ ညနေ၃နာရီအချိနတွင်​အမှူဖွင့်​ခဲ့ရာ​တောင်​ကြီး မြို့မရဲစခန်း ​(ပ)၁၀၃၇/၂၀၁၇ ရာဇသတ်​ကြီးပုဒ်​မ ၃၈၀ ဖြင့်​အမှူဖွင့်​လှစ်​​ဆောင်​ရွက်​ခဲ့ပါသည်​။ အမှုဖြစ်​စဉ်​အားပြည်​နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှုးထံတင်​ပြခဲ့ပြီး ညွှန်​ကြားချက်​အရ ​တောင်​ကြီးခရိုင်​ရဲတပ်​ဖွဲ့မှူးဒုရဲမှူးကြီးရဲမြင့့်​၊​ခေတ္တမြို့နယ်​ရဲတပ်​ဖွဲမှူးဒုရဲမှူးစိုး​အောင်​၊မြို့မစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးမျိုးဦးတို့မှအခင်းဖြစ်​​နေရာအားကြည့့်​ရှု့စစ်​​ဆေးခြင်း၊ […]
မိတ္ထီလာတွင် စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့သည့် လူသတ်၍ကားနောက်ဖုံးအတွင်းထည့်ထားသည့်အမှုမှတရားခံများကို ဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိ မန္တလေး၊ ဒီဇင်ဘာ ၁၄ ၂၀၁၇ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က မိတ္ထီလာမြို့၊ ဈေးရှေ့ရပ်၊ ကားဝပ်ရှော့တွင် ပြုပြင်ရန် လာရောက်အပ်နှံထားသည့်NISSAN FUGA ယာဉ်အမှတ် 9J/xxxxx အဖြူရောင် စလွန်းကား ယာဉ်နောက်ဖုံး အတွင်းမှ အပုပ်နံ့ရရှိရခဲ့၍ သက်ဆိုင်ရာသို့တိုင်ကြားခဲ့ရာ မိတ္ထီလာမြို့မရဲစခန်းမှပူးပေါင်းအဖွဲ့က စစ်ဆေးရာယာဉ်နောက်ဖုံးအခန်းအတွင်း အသက် ၃၀နှစ်ခန့် အမျိုးသားတစ်ဦးအား ခန္ဓာအနှံပေါက်ပြဲထိုးသွင်းဒဏ်ရာ (၁၂)ချက်ဖြင့် အလောင်း(၁)လောင်း၊အသက် ၃၀နှစ်ခန့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးကို ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့ပေါက်ပြဲ ထိုးသွင်းဒဏ်ရာ (၅)ချက်ဖြင့် အလောင်း(၁)လောင်းတို့ကို တွေ့ရှိခဲ့၍ မိတ္ထီလာမြို့မရဲစခန်း(ပ)၄၇၁/၂၀၁၇၊ ရာဇသတ်ကြီးပုဒ်မ ၃၀၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်ခဲ့ကြောင်းသိရသည်။ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးကြီး မြင့်ဦးကိုယ်တိုင်ကြီးကြပ်ကာ အမှုစစ်အထူးအဖွဲ့များဖွဲ့စည်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်စဉ် မော်တော်ယာဉ်ပေါ်မှ သိမ်းဆည်းရမိသည့် သက်သေခံပစ္စည်းများနှင့် ကွင်းဆက်ဖော်ထုတ်စစ်ဆေး အတည်ပြုချက်များအရ […]
ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း စွန့်ပစ်ထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေထဲမှာ မန္တလေးမှတ်ပုံတင် အများဆုံးဖြစ်နေပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေ
ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း စွန့်ပစ်ထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေထဲမှာ မန္တလေးမှတ်ပုံတင် အများဆုံးဖြစ်နေပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေ ************************************************** ရန်ကုန်မြို့ ဗဟန်းမြို့နယ်၊ ကန်တော်ကြီးပန်းခြံ၊ နဂါးကျွန်းမြက်ခင်းပြင်မှာ တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ရေစိုပြန့်ကျဲနေတဲ့ မှတ်ပုံတင်ကတ်(၁၂၀)ကျော်ထဲမှာ မန္တလေးမှတ်ပုံတင်အများဆုံး တွေ့ရှိခဲ့ရာ၊ စိစစ်ဖို့ ညွန်ကြားမှု မရှိသေးဘူးလို့ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေး နှင့် ပြည်သူ့အင်အားဦးစီးဌာန ဒုတိယညွန်ကြားရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က ဆိုပါတယ် ။ ဒီဇင်ဘာ(၂)ရက်က ကန်တော်ကြီးပန်းခြံ နဂါးကျွန်းမြက်ခင်းပြင်အတွင်း စည်ပင်လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းက သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်စဉ် ရေစိုပြန့်ကျဲနေတဲ့ အိမ်ထောင်စု စာရင်းမူရင်း (၁၆)စောင် နဲ့ နိုင်ငံသား စိစစ်ရေးကဒ် မူရင်း (၁၂၀)ခုကျော်ကို တွေ့ရှိပြီး ဗဟန်းစခန်းကို အပ်နှံခဲ့ပါတယ် ။ စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ နိုင်ငံရေးစိစစ်ရေးကဒ် မူရင်းတွေမှာ မန္တလေး (၈၄)ခု၊ မကွေး (၆)ခု၊ […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on ကန်တော်ကြီးပန်းခြံအတွင်း စွန့်ပစ်ထားတဲ့ မှတ်ပုံတင်တွေထဲမှာ မန္တလေးမှတ်ပုံတင် အများဆုံးဖြစ်နေပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးက ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်နေ
ယခုနှစ်တွင်း လူပေါင်း ၃၀၀ ကျော် လူကုန်ကူးခံရ၊ ကလေး ၅၀ ကျော် ပါဝင်
ယခုနှစ်တွင်း လူပေါင်း ၃၀၀ ကျော် လူကုန်ကူးခံရ၊ ကလေး ၅၀ ကျော် ပါဝင် ================== ================== ဒီနှစ်အတွင်းမှာ လူပေါင်း ၃၀၀ ကျော် လူကုန်ကူးခံခဲ့ရပြီး ဒီထဲမှာ ကလေး ၅၀ ကျော်ပါတယ်လို့ လူကုန်ကူးမှုတားဆီးနှိမ်နင်းရေး ရဲတပ်ဖွဲ့က ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလကနေ နိုဝင်ဘာလအထိ လူကုန်ကူးမှုပေါင်း ၂၀၉ ခု ရှိခဲ့တာပါ။ ပြီးခဲ့တဲ့ အောက်တိုဘာလအထိ ၁၈၈ မှု ဖြစ်ခဲ့တာကြောင့် နိုဝင်ဘာ တလတည်းမှာ ၂၁ မှု ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ ဒီအမှုတွေကို လူပေါင်း ၆၀၀ ကျော်က ကျူးလွန်ခဲ့ပြီး လူကုန်ကူးခံရသူကတော့ ၃၃၄ ယောက်ရှိပါတယ်။ ဒီထဲမှာ ယောင်္ကျားလေး ၁၁ ယောက်နဲ့ မိန်းကလေး ၄၂ […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on ယခုနှစ်တွင်း လူပေါင်း ၃၀၀ ကျော် လူကုန်ကူးခံရ၊ ကလေး ၅၀ ကျော် ပါဝင်
နန်းမြင့်သိန်းအေးကို ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ မူယစ် တိုက်ဖျက်ရေးရဲချုပ်၏ ပြောကြားချက်
နန်းမြင့်သိန်းအေးကို ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ မူယစ် တိုက်ဖျက်ရေးရဲချုပ်၏ပြောကြားချက် ထိုင်းနိုင်ငံ ဘန်ကောက်မြို့ မှာ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသူ နန်းမြင့်သိမ်းအေး ကို မူးယစ်ရာဇာတွေရဲ့တရားမ၀င်ငွေကြေးတွေကို လက်ခံငွေလွဲပြီး တရားဝင်ငွေတွေဖြစ်လာအောင် ကြားခံ ရင်နှီးမြုပ်နှံပေးနေတဲ့ အမှုနဲ့ဘန်ကောက်မြို့ က ရချဒါ တရားရုံးမှာစတင်တရားစွဲတော့မှာပါ။ သူမနဲ့ အတူ မူးယစ်မှုနဲ့ဖမ်းထားတဲ့ တရားခံသုံးဦးကိုပါ ရုံးထုတ်တရားစွဲမယ်လို မူးယစ်နိမ်နင်းရေး ရဲချုပ်က သတင်းအင်တာဗျူးမှာ ထုတ်ဖေါ်ပြောဆိုသွားပါတယ်။ တရားခံတွေကို ထိုင်းရဲတွေ က စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးနေတာ ဟာ နှစ်နဲ့ ချီအချိန်ယူခဲ့ရပါတယ်၊ သက်သေအထောက်အထား မှတ်တမ်းဓါတ်ပုံတွေ ဘဏ်ငွေဝင်ငွေထွက်စားရင်းတွေကို အထူးလေ့လာစောင်ကြည့်နေခဲ့တာလို့ ဆိုပါတယ်။ တရားခံအဖြစ်တရားစွဲမယ့် နန်းမြင့်သိန်းအေးနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့သူ […]
Posted inမူခင်းသတင်းLeaveaComment on နန်းမြင့်သိန်းအေးကို ဖမ်းဆီးလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်နဲ့ပါတ်သက်ပြီး ထိုင်းနိုင်ငံ မူယစ် တိုက်ဖျက်ရေးရဲချုပ်၏ ပြောကြားချက်